7 အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးမှုနှင့်ရောင့်ရဲရန်မသင့်သောအကြောင်းရင်း ၇ Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ 7, 2015 အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ 7, 2015 Douglas Karr
တစ်ခါတစ်ရံလူ ဦး ရေအချိုးအစားသို့မဟုတ်ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာအုပ်စုများနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောတွေ့ရှိချက်များကိုကျွန်ုပ်ဖတ်သည့်အခါအနည်းငယ်ညည်းတွားသည်။ ငါ NewsCred သည်ဈေးကွက်တင်သူများအတွက်မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်ဟုဤအစီရင်ခံစာကပြောခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်အချက်အလက်နှင့်ယေဘူယျအားဖြင့်မကြာခဏတိကျမှန်ကန်မှုမရှိသောနိဂုံးချုပ်ခြင်းများကိုယုံကြည်တတ်သည်။
ငါတစ်ယောက်ယောက်ကိုမကြာခဏမေးတယ်၊ မင်းက ၁,၀၀၀ တုန့်ပြန်မှုနှုန်းရှိသူ ၁၀,၀၀၀ ဒါမှမဟုတ် ၂၅% တုန့်ပြန်မှုနှုန်းရှိတဲ့လူ ၅၀၀ ကိုခင်ဗျားမေးမှာလား။ သင်သင်္ချာနှင့်သင်ရုန်းကန်နေရလျှင်နောက်ထပ် ၂၅ ဦး ထပ်မံဖြေဆိုမည်။ ဒါကြောင့်တခါတလေပျမ်းမျှဘယ်တော့မှသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်နယ်ပယ်များရှိရာပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာသွားရပေမည်။
တကယ်တော့အနှစ်တစ်ထောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတောင်မှငြင်းခုန်ပေလိမ့်မည် နောက်ထပ် counterproductive ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤစစ်တမ်းမှရရှိသောအချက်အလက်များအရ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့အားရောင်းချရန်ဆန္ဒမရှိကြပါ။ ထိုလူမှုရေးအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်မဟာဗျူဟာအားလုံးတွင်၎င်းတို့ကိုရောင်းချရန်သင်အဘယ်ကြောင့်ချန်လှပ်ထားခဲ့သနည်း။ ငါဆိုရှယ်မီဒီယာကိုကြားခံတစ်ခုအဖြစ်အကြံပြုနေဆဲဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားနေသည့်ကဏ္uponများအပေါ် မူတည်၍ မဟာဗျူဟာသည်လုံး ၀ ကွဲပြားလိမ့်မည်။
အဘယ်ကြောင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အနှစ်တစ်ထောင်ဂရုစိုက်သလဲ? ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ရောက်ရင်အနှစ်တစ်ထောင်ကျော်ဟာအသုံးစရိတ်ဒေါ်လာ ၁.၄ ထရီလီယံကျော်ရှိလိမ့်မယ်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေအတွက်ဆိုလိုတာကအကယ်လို့သင်ဟာနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုမရောက်ရှိဘူးဆိုရင်၊ မင်းဟာအနာဂတ်နဲ့အတူလိုက်လျောမှာမဟုတ်ဘူး။ အကြောင်းအရာသည်အမှတ်တံဆိပ်ဆက်နွယ်မှုများကိုမောင်းနှင်သည်၊ သို့သော်သင်၏အကြောင်းအရာသည်သင်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်နှင့်လုံးဝမအောင်မြင်ပါကအချက်ကားအဘယ်နည်း။ အနှစ်တစ်ထောင်ကျော်၏ ၆၂% ကအွန်လိုင်းအကြောင်းအရာများကသူတို့ကိုအမှတ်တံဆိပ်အပေါ်ပိုမိုချိတ်ဆက်ပြီးသစ္စာစောင့်သိသည်ဟုခံစားရသည်။ သို့သော် ၃၂% သာယနေ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆက်သွယ်ရေးသည်အထောက်အကူဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်သည်။
တစ် ဦး ချင်းစီ '' ထူးခြားသောမှချုပ်ကိုင်အကြောင်းအရာ ယဉ်ကျေးမှုအကျိုးစီးပွား.
အကြောင်းအရာသေချာအောင်လုပ်ပါ အသုံးဝင်သောသို့မဟုတ်အထောက်အကူဖြစ်စေ အနှစ်တစ်ထောင်၏နေ့စဉ်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်။
အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ Self- မြှင့်တင်ရေး.
ဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည် စဉ်းစားစရာ နှင့်အသိဉာဏ်။
ငွေမချေးပါနဲ့ Viral သို့မဟုတ်တစ် ဦး တည်းလူမှုရေးထောက်ခံချက်။
သေချာစေသည personalization စျေးနှုန်း၊ တည်နေရာ၊ ပြိုင်ပွဲစသဖြင့်
အကြောင်းအရာများကိုနှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ စျေးကွက်သို့ရောင်းချခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုလျှင်၎င်းကိုမှန်ကန်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအကြောင်းလေ့လာခြင်းလေးခုအပါအ ၀ င် NewsCred ၏အခမဲ့အနှစ်တစ်ထောင်လမ်းညွှန် ယနေ့!
Tags: အကြောင်းအရာ infographicအကြောင်းအရာစျေးကွက်infographicအနှစ်တစ်ထောင်ထောင်စုနှစ် infographicသတင်း